Clenbuterol (CLEN) vovoka HCL (21898-19-1) hplc≥98% | AASraw
Ny vovony Clenbuterol hydrochloride
/ Products / Vokatry ny vinaingitra / Vovoka Clenbuterol (CLEN) HCL
Ny vovony Clenbuterol (CLEN) HCL
4.00 avy amin'ny 5 miankina amin'ny 8 mpanjifa naoty
SKU: 21898-19-1. Sokajy: Vokatry ny vinaingitra
Ny AASraw dia miaraka amin'ny synthesis sy ny fahaiza-mamokatra avy amin'ny grama ho an'ny lamina lehibe Clenbuterol (clen) vovoka HCL (21898-19-1), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao azo jerena.
Clenbuterol (CLEN) horonantsary vovoka HCL
|.Raw Clenbuterol (CLEN) HCL ireo karazana fototra:
Name: Ny vovony Clenbuterol (CLEN) HCL
Meny fitetezana 313.65
II.Raw Clenbuterol (CLEN) fampiasana vovoka HCL amin'ny tsingerin'ny steroid
Clenbuterol hydrochloride (CAS 21898-19-1) matetika dia antsoina hoe Clen, Clen HCL, avy amin'ireo mpamorona bodybuilders na mpampiasa fatiantoka matavy.
2. Fampiasana vovoka Clenbuterol HCL:
Clenbuterol hydrochloride dia manana tanjaka mafy handoroana tavy. Misy fiantraikany thermogenic ihany koa (manaitra ny vatana vatana). Ny Clen dia mampitombo ny tosidra ary mampihena ny fo. Ity fitokonana ity dia mitarika amin'ny fitomboan'ny hafanana amin'ny vatana. Raha ny angon-drakitra, dia miteraka glycogenolysis (famotehana glycogen), izay no mahatonga ny fandoroana tavy amin'ny vatana.
3. Fampitandremana momba ny vovobony Clenbuterol HCL:
4.Faritana fanampiny momba ny vovobony Clenbuterol HCL:
Ao an-tsena, maro be ny Clen sandoka, izany hoe Salbutamol normal.
Raha manana legit Clenbuterol ianao dia mila maka ny hafananao. Alohan'ny hanombohanao ny tsingerina Clen, alao ny hafanana amin'ny maraina ary rehefa any Clen ianao dia alao indray.
Raha io no tena fiasa dia hahita fihenan'ny hafanana amin'ny vatana ianao. Tokony hiainanao koa ny fikorontanan-tànana sy ny fitempon'ny fo haingana. Ny sasany aminareo dia tsy hahita izany vokatra izany amin'ny fatra ambany, koa apetraho ny fatra ary jereo izay mitranga. Raha tsy misy amin'ireny zavatra ireny hitranga na dia fatra amin'ny 80-100mcg ianao, dia mazava ho azy fa resy ianao.
5. Ny vovoka Clenbuterol HCL vovony (CAS 21898-19-1):
Ny "Clen" sandoka mahazatra dia Salbutamol, izay antsoina koa hoe albutamol. Ny fahasamihafana lehibe amin'izy ireo dia ny fatra. Clen dia ao amin'ny 40mcg ary salbutamol dia ao amin'ny 100mg. Afaka mamofona fofona mofomamy ihany ianao ary hahafantatra hoe iza no tena misy. Ho an'ny fitsapana fahadiovana, mety mila manao fitiliana HPLC ianao.
Manamboatra vovony voankazo Liquid Clen HCL amin'ny 100mcg / ml
TOROHEVITRA: Mety hampidi-doza ny fandefasana hafatra amin'ireto sôkômba roa ireto, aza mampitaingina azy ireo raha tsy fantatrao izay ataonao, na mety mandoka. Jereo lahatsoratra eto ambany.
Tavoahangy sy mpitily (miaraka amin'ny fandrefesana anaty rano
Sarotra vita amin'ny Latex
Maska mpanao hosodoko
Tontolo iainana Sterile
Fantsona famatsiana rano 12 lehibe (siny dia ampy)
Ny fanaovana 100mcg / ml Clenbuterol (Ity koa ity fomba ity dia mety ho an'ny T3 ihany koa).
Raha misy olona mahita ny matematika tsy mety dia ampahafantaro ahy, saingy heveriko fa izaho no miandany ny vola.
Ny BA dia hentitra amin'ny famongorana ny vovobony ary hitazona tsara ny vokatra vita, mino aho fa tsy misy maharikoriko anao intsony avy eo maka ny fatra isan'andro anao ary mahita fa ny bakteria sasany dia nametraka kolonely ao amin'ny sivinao (efa natao izany). Ka hampiasa ny 1% amin'ity atody ity izahay.
Ity fomba fampiasa ity dia ny hampiova ny vovobony 1 grama (raha marina ny ahy ny matematika dia hanao dosie 10,000).
Rano malemy = 9.9 Liters (9,900 mL). Eny izany dia litera, tsy diso lalana izany, averiko indray fa marina ny matematika azoko.)
Dingana 1. Tafio ny akanjo tonta Tyvek. Ny fiarovana dia ilaina amin'ny Clenbuterol.
Dingana 2. Apetaho amin'ny saron-tava ireo.
Dingana 3. Tafio amin'ny fonon-tanana. Ny fandefasana azy ireo amin'ny akanjo dia safidy.
Dingana 4. Ny vovony refesina amin'ny refy. Te hahazo 100% azo antoka amin'ny tanjona fatra ianao.
Dingana 5. Ampio ny vovony ho lasa beaker.
Dingana 6. Asio BA hampisavoana.
Dingana 7. Asio rano ao anaty vata lehibe.
Dingana 8. Ampio rano mifangaro Clen ary afangaro tsara.
Dingana 9. Ampidiro amin'ny tavoahangy ary ampio ambony.
Ny vokatra farany dia tokony 10 litera Clen amin'ny 100mcg / ml.
Ity fomba fanao ity dia natao ho an'ny fialam-boly foronina ary tsy tokony hotorana. Ireo zavatra simika mampidi-doza. Izy ihany koa ny teoria ary tsy notanterahana teo aloha.
-IMO misy fomba iray anaovana izany alohan'ny tokony hanaovana an'io fako io ao anaty siny… tena tsotra…
-mametika ny refin'ny 0.2g (eny fa na sombin-karama iray dia novakianao tsara)
-pour 200mls de everclar ho ao anaty lovia mifangaro amin'ny karazan-jaza, na ny beaker
-mba ny vovobon'ny clen 0.2g, ary ampiharo ny hafanana ambany… mora be io dizzolve io, ka manam-paharetana ary aza esorina.
aorian'izany dia arotsaho ao anaty fitoeran-drano lehibe iray ilay vahaolana dizzolved… mampiasa pôlitika rano aho miaraka amin'ny tampony ambony.
- avy eo ampio ny rano mifangaro 800ml…
-BAM! ... manana 1000ml ny ranon'ny clen ianao @ 200mcg / ml
- hosintaho izany ary fenoy ny boaty 50ml na 100ml ary dia vita.
Ny takelaka vovoka Clenbuterol HCL - 20mcg
1. Afangaroy ny singa rehetra ao anaty lovia Turbula, ary tsindrio amin'ny takelaka misy fametahana 20kN.
2. Mampifangaro ao anaty takelaka 100mg, mampiasa poavambe 8mm.
IV. Fomba fividianana vovobony Raw Clenbuterol HCL (CAS 21898-19-1); hividianana vovoka CLEN HCL amin'ny AASraw?